जायन अली सलमान: चार वर्षकै उमेरमा फुटबल खेल्न आर्सनल क्लबको प्री–अक्याडमीमा भर्ना | News Polar
न्यूजपोलार कार्तिक ०९, २०७८, मंगलबार
एजेन्सी । यूकेको एउटा चर्चित फुटबल क्लबको ध्यान एक चारवर्षे बालकमाथि परेको छ । आर्सनल प्री–अक्याडमीमा भर्ना हुन पाउने यी बालक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कान्छा खेलाडी हुन् ।
उनको सीप र क्षमता उनको भन्दा दुईगुना उमेर भएका खेलाडीको जस्तो छ। उनी जायन अली सलमान हुन् । उनी चार वर्षका भए । उनलाई मनपर्ने टिम आर्सनल हो । जायन अलीका प्रशिक्षकले उनमा विशेष क्षमता देखे ।
फस्र्ट टच फुटबल अक्याडमीका प्रशिक्षक अस्टिन शेफील्ड भन्छन्, ‘हामी उनलाई उनकै उमेर समूहका ४,५,६ वर्षकासँग राख्छौं । अनि अहिले नै उनी अरुभन्दा अब्बल देखिइसकेका छन् । अरुभन्दा धेरै तीब्र र बल खोस्न जान अरुभन्दा बढी तत्पर छन् । त्यसैले हामी उनलाई अघि बढायौं । मैले उनका बुबासँग कुरा गरेँ । उनी जायन अलीलाई जेठा खेलाडीहरुसँग खेलाउन इच्छुक देखिए । अनि मलाई लाग्यो लौ हेरौं न त ।’
उनको क्षमताले आर्सनल क्लबका प्रतिभा खोजकर्ताको ध्यानाकर्षण गर्यो । आर्सनलका ट्यालन्ट स्काउट स्टीभन डीन्स भन्छन्, 'यी बालक जे गरिरहेका छन् त्यो उनले गर्नुपर्ने कुरा होइन । उनी जसरी बल प्रहार गर्छन्, उनको उमेरका मानिसहरुका लागि कठिन हुन्छ । मैले मेरा साथीहरुलाई बोलाएँ अनि उनले भने, हेर उनी ४ वर्षका भए । मैले भनेँ, हुनै सक्दैन । उनी शिशुकक्षमा जानु हुँदैन । म उनका आमाबाबुसँग कुरा गर्छु । अनि हामी अहिले त्यहाँबाट यहाँ छौं । हाम्रा केही अभ्यास सत्रमा उनलाई ल्यायौं पनि । अनि उनी जुन बेला पनि उस्तै प्रतिभा देखाउँछन् । त्यसैले त्यो एक पटकको झलक मात्र होइन । उनी निरन्तर राम्रो गरिरहेका छन् ।'
बुबाका अनुसार जायन अली पहिलादेखि नै विशेष थिए । बुबा अली सलमान भन्छन्, 'उनी जन्मेकै बेला मलाई त्यस्तो लागेको थियो । नर्सले उनलाई घोप्टो पारेर सुताएको बेला नै उनले टाउको उठाए । यताउता हेरेको म सम्झन्छु । उनी पनि छक्क परेकी थिइन् । निकै सानो बेलादेखि नै उनी धेरै बलियो थिए भनेर भन्न सक्नुहुन्छ । अनि अँ त्यसले उनको पालनपोषणका एक किसिम तरिका निर्धारण गर्यो । तपाई देख्न सक्नुहुन्छ । उनी अरु सबै बच्चाभन्दा भिन्न थिए । अनि मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा भिन्न चाहिँ उनको सन्तुलन हो । सानै बेलादेखि उनको सन्तुलन अविश्वसनीय थियो ।'
बीबीसीकी संवाददाता हुमा शाह भन्छिन्, तपाई अग्ला र ठूला मान्छेसँग पनि खेल्नुहुन्छ ?
जायन – सात, नौ र आठ ।
शाह– कस्तो महसुस हुन्छ किनभने तपाई चार वर्षमात्र हुनुभयो ?
जायन– एकदमै नराम्रो लाग्छ किनभने अली गाह्रो हुन्छ ।
उनी पाँच वर्ष मात्र लागेका छन् । यद्यपि अरु ठूला क्लबले पनि उनलाई बोलाउन थालिसकेका छन् । बीबीसीको भिडियो सामग्रीको सहयोगमा
प्रकाशित : कार्तिक ०९, २०७८, १६:०८:४०